बुधबारको दिन यी काम गरे मिल्नेछ सोचेभन्दा धेरै सफलता ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बुधबारको दिन यी काम गरे मिल्नेछ सोचेभन्दा धेरै सफलता !
बुधबारको दिन यी काम गरे मिल्नेछ सोचेभन्दा धेरै सफलता !
हिन्दुधर्मअनुसार बुध ग्रहलाई विष्णुको अवतार मानिन्छ । विष्णु भगवानसँग धन सम्पति वैभव जोडिएको हुन्छ । बुधको दिशा उत्तर हो भने उत्तर दिशामा कुबेरको स्थान रहेको हुन्छ । बुधलाई महत्वपूर्ण तथ्यहरु वाणीको कारक, बुद्धिको कारक, त्वचाको कारक, मस्तिष्कको तंत्रिका तन्त्रको कारक को रुपमा मानिन्छ ।
यदि तपाईको घरमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बुध ग्रहलाई पुजा गर्नुहोस् । यसले समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यदि यस्तो समस्याहरु आएका छन् भने त्यसको प्रभावलाई विभिन्न उपायहरु अपनाएर हटाउन सकिन्छ । साथै बुधबार विष्णु भगवानको पुजा आरधना गर्नाले विद्या, धन तथा व्यापारिक उन्नतिको साथै बुढेसकाबाट टाढा रहन सकिन्छ ।
त्यस्तै यी बाहेक अन्य कार्यहरु पनि गर्न सकिन्छ । हेरौँ केके हुन् त ?
१.बुध ग्रहलाई प्रसन्न बनाउनको लागि भगवतीको पुजा गर्ने ।
२.बुधबारको दिन हरियाली घाँसपात खोजेर वस्तुभाउलाई खुवाउने ।
३.समलिंगीहरुको सेवा गर्ने ।
४.हरियो चना भिजाएर बुधबारको दिन चराचुरुङ्गीलाई खुवाउने ।
५.नौ वर्ष भन्दा कम उमेरका कन्याका खुट्टा धोएर उनीहरुबाट आर्शिबाद लिने ।
६.बुधबार भगवान विष्णुको व्रत बस्ने ।
७.बुध ग्रहको अशुभफललाई शुभमा परिवर्तन गर्न गणेशको पुजा गर्ने ।
८.यदि तपाई धनको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने श्री गणेशलाई बुधबारको दिन घ्यू र सख्खर चढाउने ।
यिनै नेपाली थिए, जो भारतमै ४० डाकासँग एक्लै लडेर नारीको ईज्जत जोगादिए…
लगातार बढेको सुनको मुल्य आज भने घट्यो
सलह किरा नेपाल भित्रिएपछि सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
आज कुशे औँसी अर्थात बुवाको मुख हेर्ने दिन : आफ्नै छोरीको ह,त्या गर्ने बाबु पक्राउ
ग्रहदशा बिग्रेको भन्दै ज्योतिष लिएर हिरासत पुगिन् निकिता, रविबारे ज्योतिषले यस्तो भने